मैले जिते काँग्रेसलाई जनतासंग रिकनेक्ट गर्ने प्रयास हुन्छ : सचिव पदका उम्मेदवार सुनार (भिडियो सहित) « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७८, मंगलवार १४:२१
नेपाली काँग्रेसको चौधौ महाधिवेशनको चहलपहल शुरु भएको छ । यसक्रममा सदस्यताको लामो रस्साकस्सीबीच कैलालीमा पनि विभिन्न तहका चुनाव हुने भएका छन् ।
काँग्रेसका विभिन्न तहका निर्वाचन हुने भएपछि विभिन्न पदका आकांक्षीहरु पनि देखिन थालेका छन् । त्यसक्रममा नेपाली काँग्रेस कैलालीको सचिव पदमा ४० वर्षीय युवा नेता नृप सुनार पनि सचिव पदका आकांक्षी देखिएका छन् ।
प्रस्तुत छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातोकोत्तर (एमविए) उत्तिर्ण गरेका सचिव पदका उम्मेदवार सुनारसंग उनको उम्मेदवारी र काँग्रेस कैलालीको समग्र अवस्थामा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
के कात्तिक २७ गते पक्कै पनि वडा अधिवेशन हुन्छ त ? तपाई प्रचार विभाग प्रमुख भएकोले पनि काँग्रेस कैलालीको समग्र अवस्था बारे पनि बताइ दिन न ?
प्रत्येक संघीय निर्वाचनबाट २५ जनाका दरले महाधिवेशन र १० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट १७ जनाका दरले प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि छानिने छन् । यस्तै गरेर जिल्लामा एक सभापति र २/२ उपसभापति, सचिव र सहसचिव निर्वाचित हुनेछन् । एक जना कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित जिल्ला कार्य समिति सदस्यबाटै मनोनयन हुनेछन् ।
कैलालीका स्थानीय तह र विभिन्न सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ सचिव निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार रोक्न कुनै अभियान चलाउनु हुन्छ ?
हामीले विगतमा पनि स्थानीय तहको अनुगमन गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थियौ ।
त्यो कामले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न सहज भएको स्वयम् बताउने गरेका थिए । त्यस्ता काम निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि आएको थियो । हामीले दिएका सुझाव र प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएकालाई अप्ठेरो परेको थियो ।
त्यो प्रतिवेदन अख्तियारमा पनि पुगेको थियो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नयाँ टुल र विज्ञका साथ निरन्तरता दिन जरुरी छ ।